LG G3 Flex dia ho tonga amin'ny volana martsa 2016 | Androidsis
LG G3 Flex dia ho tonga amin'ny volana martsa 2016
Ny iray amin'ireo fitaovana nahatonga fahatsapana roa taona lasa izay dia efa hahazo ny fanavaozana fahatelo, miresaka momba ny LG G3 Flex. Ity taranaka fahatelo an'ny fitaovana ity dia ho tonga miaraka amina zava-baovao maro izay ho hitantsika any aoriana, ny G3 Flex no handimby ilay kinova ankehitriny, ny G2 Flex, fitaovana iray natolotra nandritra ny CES 2015.
Ny marika monina any Korea atsimo dia nametraka foto-kevitra finday misy sary miolakolaka taona lasa izay, LG Flex. Ity fitaovana ity dia hanamarika kely ny fironana vaovao amin'ny finday avo lenta ary, tsikelikely, manomboka mahita amin'ny marika sasany isika. Ity fironana vaovao ity dia ny fampitaovana ireo fitaovana ao anaty efijery miolaka, porofon'izany ny fahitana ny Samsung Galaxy S6 Edge na ny fitaovan'ny LG azy manokana.
LG dia te-hizara ny haavony avo lenta miankina amin'ny fisian'ny efijery miolikolika na tsia, ka raha mijery ny tsena Android isika dia hahita ny LG G2 Flex sy ny LG G4. Fitaovana roa manana refy mitovy, ary misy fahasamihafana eo amin'ny fitaovana entin'izy ireo, saingy tsy isalasalana fa ireo no fitaovana matanjaka indrindra amin'ny marika Koreana.
LG G3 Flex, famaritana mivoaka
Ny taranaka fahatelo dia antenaina ho tonga amin'ny volana martsa amin'ny taona ho avy, fa amin'ny Internet kosa dia mandeha ny vaovao ary betsaka kokoa ny onja. Ka mandritra ny 4 volana eo ho eo alohan'ny hamarotana ilay fitaovana dia efa fantatsika ny mombamomba azy. Ny fitaovana ho avy miaraka amin'ny efijery miolaka dia ho tonga eo ambanin'ny processeur vaovao Qualcomm, ny snapdragon 820, miaraka aminy, 4 GB Memory RAM sy 32 GB ny tahiry anatiny miaraka amin'ny mety hanitarana azy amin'ny alàlan'ny slot microSD.
Ny terminal dia afaka mampitombo ny haben'ny efijery, mamela ireo 5 santimetatra hahatratra ny 6 santimetatra. Ary havaozina ihany koa ny famolavolana ny efijery ary hiresaka momba ny LG G3 Flex isika, hisy eo amin'ny efijery a Famahana 2K. Ny famolavolana azy dia tsy tokony hiova firy, noho izany dia hahita endrika mitovy amin'ilay endrika ankehitriny amin'ny tsipika Flex isika, eo ambanin'ny vatan'ny vy. Anisan'ireo fiasa hafa hitantsika, fakan-tsary 20,7 Megapixels ary 8MP ho an'ny fakan-tsary aoriana sy fakan-tsary eo aloha. Hampiditra scanner fanaovana pirinty izy ary ny bateria dia 3500 Mah.
Amin'izao fotoana izao dia afaka milaza bebe kokoa momba ny terminal amin'ny ho avy isika, ka tsy manan-tsafidy isika afa-tsy ny miandry izay hitranga amin'ny volana ho avy hahafantarana bebe kokoa momba azy io, toy ny fisian'izany sy ny vidiny fanombohana. Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao amin'ireo fantsona misy efijery miolaka toa ny tsipika LG's G Flex? ?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG G3 Flex dia ho tonga amin'ny volana martsa 2016
Signal, ilay fampiharana fandefasan-kafatra notohanan'i Snowden tenany, azo alaina amin'ny Android izao
[APK] Azonao atao izao ny manisy marika ny hafatra ho ankafizinao ao amin'ny WhatsApp